आईपिएलमा सन्दिपलाई स्टाईलिस प्लेयर अवार्ड – आफ्नो समाचार
Afno News — ५ जेष्ठ २०७५, शनिबार १०:३४0comment
गएराती भएको भिभो आइपिएलमा चेन्नाई विरुद्धको क्रिकेट प्रतियोगितामा महत्त्वपूर्ण क्षणमा विकेट लिएकोमा सन्दीपले ‘स्टाइलिस प्लेयर’ को अवार्ड जित्दै १ लाख नगद पुरस्कार हात पारेको छ ।
आइपिएलमा नेपाली युवा स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित दिल्ली डेयरडेभिल्सले चेन्नाई सुपर किङ्सलाई ३४ रनले पराजित गरेको थियो । चेन्नाई विरुद्ध दिल्लीको जितमा सन्दीपको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको थियो । खेलको दोस्रो ओभरमा बलिङ गर्न आएका सन्दीपले २ रन दिएका थिए । खेलको १२ औं र आफ्नो दोस्रो ओभरमा भारतका दुई निकै अनुभवी ब्याट्सम्यान महेन्द्र सिंह धोनी र सुरेश रैनालाई बलिङ गर्दै उनले ६ रन खर्चे ।
खेलको १४ औं तथा आफ्नो तेस्रो ओभरको पहिलो बलमै सन्दीप रैनाको विकेट लिन सफल भए । त्यस्तै १६ औं ओभरमा आफ्नो अन्तिम ओभर बलिङ गर्दा सन्दीपले ११ रन दिए । समग्रमा ४ ओभरमा सन्दीपले २१ रन दिए । सो खेलमा सन्दीपको प्रदर्शनले उनलाई विश्व क्रिकेटमै चर्चाको विषय बनाएको छ ।
विदेशी खेलाडीहरुबाट सोचेअनुरुप प्रदर्शन पाउन नसकेको दिल्ली डेयरडेभिल्स प्रतियोगिताभरी खेलाडिहरुको सहि संयोजनको खोजीमा थियो । तर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएपछि मात्र मौका पाएका सन्दीपको प्रभावशाली प्रदर्शनपछी आफ्नो गल्तीको महसुस पनि दिल्लीले पक्कै गरेको छ ।
सन्दीपको २ खेलको प्रदर्शनपछी ट्विटरमा विभिन्न क्रिकेट खेलाडी तथा आइपिएलका कमेन्टेटर र विश्लेषकहरुले सन्दीप र नेपाली क्रिकेटको निकै चर्चा गरेका छन् ।
फाइनलमा बार्सिलोना स्तब्ध
मेसीलाई छैटौं गाेल्डेन बुट
आजको खेलः पोर्चुगल विरुद्ध स्पेन-कसले बाजी मार्ला ?
यो गीतले सबैलाई बनायो हैरान(भिडियो सहित)
घरमा दियो बाल्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु !
१ सय ५९ जना सगरमाथाको शिखरमा